Cotinus coggygria वा विग रूखको विशेषता र हेरचाह | सबै रूखहरू
मोनिका सान्चेज | 21/04/2022 14:31 | सजावटी रूखहरू, फिचस, पर्णपाती सजावटी
छवि - विकिमीडिया/जोआना बोइस
El Cotinus coggygria यो एक अपेक्षाकृत सानो रूख हो जसले जिज्ञासु फूलहरू उत्पादन गर्दछ, यति धेरै कि यसले विग रूखको नाम प्राप्त गर्दछ किनभने फूलहरू यीसँग मिल्दोजुल्दो छ। थप रूपमा, यो एउटा बिरुवा हो जुन टेरेसलाई सजाउन र बगैंचामा कम वा मध्यम हेज बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले छाँट्नेलाई राम्रोसँग सहन सक्छ, त्यसैले यो फ्यानहरू र बोन्साईका प्रेमीहरूको लागि एक रोचक प्रजाति हो।
र यदि त्यो पर्याप्त थिएन भने, हामी रूखको बारेमा कुरा गर्दैछौं समशीतोष्ण देखि उपोष्णकटिबंधीय सम्म विभिन्न प्रकारका हावापानीहरूमा बस्नको लागि राम्रोसँग अनुकूल छ। यसलाई कहिले आराम गर्ने भनेर जान्नको लागि चिसो जाडो चाहिन्छ, त्यसैले वर्षभरि तापक्रम उच्च रहने क्षेत्रमा यसलाई बढ्न सम्भव हुँदैन।
1 विग ट्री सुविधाहरू
3 Cotinus coggygria को कसरी हेरचाह गरिन्छ?
3.6 छाँट्ने काम
विग ट्री सुविधाहरू
छवि - विकिमीडिया/Uebermut57
हाम्रो नायक यो पातलो रूख हो जुन5देखि7मिटरको उचाइमा पुग्छ जसको वैज्ञानिक नाम हो Cotinus coggygria। यो दक्षिणपूर्वी यूरोपको मूल निवासी हो, यद्यपि यो एशियामा पनि पाइन्छ। यसको पातहरू अण्डाकार हुन्छन्,3र 8 सेन्टिमिटरको बीचमा नाप्छन्, र विविधता अनुसार हरियो वा रातो हुन्छ। शरद ऋतुमा तिनीहरू पहेंलो वा रातो हुन्छ।
वसन्तमा फूलहरू, ३० सेन्टिमिटर लामो पुष्पक्रममा समूहबद्ध पहेंलो फूलहरू उत्पादन गर्दै। र यसको फलहरू लगभग 30 मिलिमिटरको ड्रपहरू हुन् जुन गर्मीमा परिपक्व हुन्छ।
Al Cotinus coggygria यो केवल एक प्रयोग दिइएको छ, Ornamental। यो बगैंचामा रोपिन्छ, भाँडोमा हुर्किन्छ र बोन्साईको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, यसलाई झाडीको रूपमा वा सानो रूखको रूपमा लिन सम्भव छ, किनकि यो एक बिरुवा हो जुन जाडोको अन्त्यमा र पहिले कीटाणुरहित औजारहरूको साथमा छाँट्नेबाट राम्रोसँग निको हुन्छ।
तपाइँ कसरी ख्याल गर्नुहुन्छ Cotinus coggygria?
यो एक बिरुवा हो जुन हेरचाह गर्न धेरै सजिलो छ। यसलाई कुनै विशेष ध्यानको आवश्यकता पर्दैन, यद्यपि यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाईले तल दिएको सल्लाहलाई ध्यानमा राख्नुहोस्:
यो बाहिर, बगैंचामा वा भाँडोमा हुनुपर्छ, र यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यसले घाम पाउँछ, दिनमा कम्तिमा केही घण्टा, अन्यथा यो सामान्य रूपमा विकास गर्न सक्षम हुनेछैन र कमजोर बन्द हुनेछ।
यसको जराहरू आक्रामक छैनन्, त्यसैले यदि तपाईं यसलाई जमिनमा रोप्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई अन्य बिरुवाहरू वा नरम फुटपाथको नजिक राख्न सक्नुहुन्छ।
छवि - विकिमेडिया / 阿 橋 मुख्यालय
बगैंचा: यो जैविक पदार्थ भएको र राम्ररी निकास भएको माटोमा उम्रने बिरुवा हो।
फूल भाँडो: यदि तपाइँ यसलाई एकमा राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई विश्वव्यापी बाली माटोले भर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ब्रान्डहरूबाट। BioBizz o फूल। अर्को विकल्प निम्न मिश्रण आफैं बनाउनु हो: 60% पीट + 30% पेरलाइट + 10 केंडु ह्युमस।
सिंचाई यो मध्यम हुनु पर्छ। यसको मतलब यो हो कि यदि, उदाहरण को लागी, मौसम धेरै तातो र सुख्खा छ, माटो छिट्टै ओसिलो गुमाउन गइरहेको छ र रूख बढ्दै छ, यो दुई, तीन वा चार पटक पानी कोशिस गर्न आवश्यक हुनेछ। एक हप्ता, मौसममा निर्भर गर्दछ। पृथ्वी सुक्न कति समय लाग्छ।
यसको विपरित, चिसो वा चिसो महिनाहरूमा, यो कम बारम्बार गर्नु पर्छ, किनकि यदि हामीले जाडोमा हप्तामा3वा4पटक पानी दिइरह्यौं भने, हाम्रो जरा पक्कै सड्नेछ। वास्तवमा, त्यो मौसममा, यसलाई पानी दिन आवश्यक नहुन सक्छ, वा यो क्षेत्रको हावापानी अनुसार धेरै कम गर्नु पर्ने हुन सक्छ, र यदि यो पानी पर्यो भने यसलाई हाइड्रेट गर्न आवश्यक पर्दैन।
विग रूख बढ्दो मौसममा उर्वर गर्न सकिन्छ, अर्थात्, वसन्त र गर्मी मा। त्यसै गरी, यो शरद ऋतु सम्म जारी राख्न सम्भव छ यदि त्यो मौसममा तापमान हल्का छ र त्यहाँ कुनै फ्रस्ट छैन। यसका लागि, प्राकृतिक र/वा पारिस्थितिक उत्पत्तिको उर्वरहरू प्रयोग गरिनेछ, जस्तै गुआनो, मल वा गँड्यौला ह्युमस। यदि तपाइँ यसलाई भाँडोमा राख्नुहुन्छ भने, यो उर्वरक वा तरल मलहरू प्रयोग गर्न अत्यधिक सल्लाह दिइन्छ ताकि जराहरूले पोषक तत्वहरू चाँडै अवशोषित गर्न सकून्।
El Cotinus coggygria यो रूख वा सानो रूख हो बिरुवा माटोको भाँडोमा बीउबाट गुणा हुन्छ, र वसन्तमा अर्ध-काठ काट्ने। वास्तवमा, तपाईंले नयाँ नमूनाहरू प्राप्त गर्न केही छाँटका अवशेषहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। जरा हर्मोनहरू (यस्तै बाट यहाँ) र त्यसपछि तिनीहरूलाई ड्रेनेज प्वालहरू भएका कन्टेनरहरूमा रोप्नुहोस्, उदाहरणका लागि, भर्मिक्युलाइट वा नरिवल फाइबर (बिक्रीको लागि। यहाँ)। केही हप्तामा, यदि सबै ठीक छ भने, तिनीहरू जरा सुरु हुनेछ।
छाँट्ने काम यो जाडोको अन्त्यमा वा वसन्तको सुरुमा गरिन्छ यदि यो जवान नमूना हो जुन अझै फूलेको छैन।, अन्यथा फूलहरू ओइलाउन सम्म पर्खन सिफारिस गरिन्छ। समय आउँदा, भाँचिएका र सुक्खा भएका हाँगाहरू हटाइनेछन्, र यदि आवश्यक भएमा, रूखको आकार दिनको लागि रूखको तल्लो आधाबाट अंकुरित भएका हाँगाहरू हटाइनेछ।
यसले चिसो र हिमपात धेरै राम्रोसँग सहन सक्छ, सम्मको तापक्रम सामना गर्न सक्षम छ -18ºC समस्या छैन।
छवि - विकिमेडिया / डेभिड जे। स्ट्यान्ग
विग रूखको बारेमा के सोच्नुभयो? के तपाईंले उहाँलाई चिन्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » फिचस » विग रूख (Cotinus coggygria)
पोहुतुकावा (Metrosideros excelsa)